Reforestum, ngwa iji luso ọgụ megide mgbanwe ihu igwe site na imeghari a | Network Meteorology
Reforestum, ngwa iji luso ọgụ megide mgbanwe ihu igwe site n’itughari ya
Youchọrọ ime ihe ga-arụ ọrụ n'ezie maka ịlụ ọgụ maka mgbanwe ihu igwe? Otu ụzọ iji mezuo ebumnuche gị bụ naanị site n'ịkụ osisi. Otu ihe nlele nwere ike ịmị n'etiti 10 na 30kg nke carbon dioxide otu afọ, nke, ọ bụ ezie na ọ pere mpe, nwere ike ịba ụba ma ọ bụrụ na ị mepụta oke ọhịa gị.
Mana n'ezie, maka nke ahụ, ị ​​ga-enwe nnukwu ala otu ụzọ ị ga-esi nweta ya bụ site na iji ngwa Spanish akpọrọ Oke ohia.
Oke ohia tụọ akara ụkwụ carbon nke ọrụ ị na-eme kwa ụbọchị ma jiri ya tụnyere carbon nke ọhịa ị mepụtara n'elu ikpo okwu. Oke ohia nke inwere ike ichikota mgbe nile, inyocha onyonyo satịlaịtị, foto na andma ọkwa ga abiakwute gi. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịga leta ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ, ebe oke ọhịa mbụ ga-adị na ugwu Palencia na mpaghara mbụ nke hectare 4,6 nke a ga-akụghachi na oge opupu ihe ubi nke 2017.
Kedu ka imepụta ọhịa? Ime otú ahụ dị nnọọ mfe. Naanị ị ga-abanye na ntanetị, nke ị ga-ahụ na a ga-egosipụta ọnụahịa ahụ, ihe ọ na-efu iji kwado ya, na carbon ọ na-ejide. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịhọrọ hekta ole ị chọrọ ka ọ bụrụ, ọnọdụ ya, ma mechaa pịa »Mepụta ọhịa m» iji gaa n'ihu na ịkwụ ụgwọ ahụ. Na njikere. Ga-enweworị oke ọhịa gị.
Yabụ, n'agbanyeghị oke ọhịa gị pere mpe, ị ga-enye aka na ịlụ ọgụ n'ụzọ dị irè megide mgbanwe ihu igwe site n'ụlọ, ma ọ bụ site na ịnweta weebụ na kọmputa gị ma ọ bụ site na mkpanaka gị, n'oge ọ bụla n'ụbọchị.
Anyị niile nwere ike itinye ọka anyị nwere iji nwee ahịhịa ndụ, ndụ dị ndụ karị. Anyị niile nwere ike ime ihe iji gbochie nsogbu mgbanwe ihu igwe dị njọ.
Gịnị ka i chere banyere ụzọ a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe » Reforestum, ngwa iji luso ọgụ megide mgbanwe ihu igwe site n’itughari ya
Ihe odide mgbanwe ihu igwe. Mgbe methane na-achịkwa ihu igwe
Wbọchị Wetland World Day 2017